च्याउ खोज्न गएकामाथि बाघको आक्रमण : साला र भेना दुवैको मृत्यु ! | Diyopost
बर्दिया, ११ कात्तिक । बर्दियाको मधुवन नगरपालिका वडा नं ३ को धनौरामा बाघले आक्रमण गर्दा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । भारतीय सीमाक्षेत्रसँग जोडिएको बेलझुण्डी सामुदायिक वनमा च्याउ खोज्न जाँदा बाघले आक्रमण गर्दा उनीहरुको मृत्यु भएको हो ।
बाघको आक्रमणमा परि मृत्यु हुनेमा मधुवन नगरपालिका वडा नं ३ बस्ने २७ बर्षिय दिनेश थारु र सोही ठाउँ बस्ने २६ बर्षिय रमेश चौधरी रहेका छन् । धनौराको बेलझुण्डि सामुदायिक वनमा दिनेश चौधरी विहान करिब १० बजे तिर च्याउ खोज्न गएका थिए । उनलाई सोही समयमा बाघले आक्रमण गरेको हुनसक्ने अनुमान गरीएको छ । उनी घर नफर्किएपछि खोज्न जाँदा रमेश चौधरीलाई समेत बाघले आक्रमण गरेको मधुवन नगरपालिका वडा न. ३ का वडाध्यक्ष नारायण मल्लले बताए । अध्यक्ष मल्लले नेपालको सामुदायिक वनमा बाघले आक्रमण गरी भारतको ८१ नं पिल्लर देखि ५ सय मिटर भित्रसम्म पुर्याएको बताए । मृतक दुवैजना सालाभिनाजु नाता पर्ने हुन् ।